SaynisNaturfag 8. - 10. trinn	Sagaalka Meere
Continue Reading	MEEREYAASHA SAGAALKA AH EE QORRAXDA KU WAREEGA
Written by Abdi Mohamoud Handulle on 11 February 2013. 1. Dusaa (Mercury) – waa meeraha koobaad oo ka mid ah meereyaasha qorraxda ku wareega. Waa meeraha ugu sukeeya haddii xagga qorraxda laga eego; sidoo kale wuxuu noqonayaa kan sideedaad haddii dhinaca weynaanta laga eego; waxa kale oo Soomaalidu u taqaannaa Cuddaar; wuxuu u dhexeeyaa qorraxda iyo waxaraxirta.
5. Cirjeex (Jupiter) – waa meeraha shanaad oo ka mid ah meereyaasha qorraxda ku wareega; waxa kale oo Soomaalidu u taqaanna Cirjiir iyo Mushtar; wuxuu u dhexeeyaa mariikha (Farraarre) iyo Saxalka (Raage). 6. Raage (Saturn) – waa meeraha lixaad oo ka mid ah meereyaasha qorraxda ku wareega; waxa kale oo Soomaalidu u taqaannaa Saxal; wuxuuna u dhexeeyaa Mushtarka (Cirjeexda) iyo Uraano. Waxaa ku wareega saddex garangarood oo xal-xalleefsan oo ifaya. Maalintiisu waxay le’egtahay toban (10) saacadood iyo afar-iyo-toban (14) daqiiqadood oo kuweenna ah. Sannadiisa ama inta jeer ee uu qorraxda ku wareego waxay u dhegantaa sagaal-iyo-labaatan (29) sannadood iyo boqol toddoba iyo lixdan (167) maalmood oo kuweenna ah; wuxuu leeyahay sagaal xiddigood oo ku wareega. 7. Uraano (Uranus) – waa meeraha toddobaad oo ka mid ah meereyaasha qorraxda ku wareega; wuxuuna u dhexeeyaa Raage (Saxal) iyo Netuun. 8. Netuun (Neptune) – waa meeraha siddeedaad oo ka mid ah meereyaasha qorraxda ku wareega; wuxuuna u dhexeeyaa Uraano iyo Buluto. Lixdan jeer buu dhulka ka weyn yahay. 9. Buluto (Pluto) – waa meeraha sagaalaad oo ka mid ah meereyaasha qorraxda ku wareega, waana kan ugu dambeeya dhammaan meereyaasha sagaalka ah; waa kan ugu fog haddii xagga qorraxda laga eego. Wuxuu qorraxda u jiraa lix kun oo malyuun oo km (6000 million km.).
Meeraha Mars (Faraare)
Written by Osman Aden on 23 January 2013. Mars er den fjerde planeten fra solen i vårt solsystem og er oppkalt etter den griske krigsgudinen. Planeten blir ofte beskrevet som den «røde planeten» på grunn av sitt rødlige utseende. Mars waa meeraha afraad marka xagga qorreaxda laga soo tiriyo, waxana loogu yeedhaa meeraha gaduudan marka la eego muuqaalkiisa guduudan dartii. Meeraha Mars soomaaliduna utaqaan Faraare waa meeraha ugu abtirsiinta dhow meerayaasha hab qorexeedkeena,taasoo loola jeedo muuqaalka iyo samayska oogadiisa sare.
Continue Reading	Dhirta iyo manaafacaadkooda
Written by Abdi Mohamoud Handulle on 13 November 2012. Om planter og deres nytteverdiQaybaha cunatada ee jirkeenu u baahan yahay waxaa ka mid ah Kaarboohaydataytka (carbohydrates), borootiinka (proteins), baruurta (fet), fitamiinada (vitamins), macdanta (minerals), iyo waxyaabo kale oo soo raaca. Kuwaas oo dhamaantood laga maarmaan ah, si looga helo tamarta, ama quwada aynu ku socono iyo koritaanku qofku korayo.
Continue Reading	Meerayaasha/solsystemet
Written by Osman Aden on 05 September 2012. Meerayaasha/ Solsystemet
Soo booqdayaasha	We have 164 guests and no members online